युरोप तथा खाडीका मुलुकमा विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका रामेश्वर शाह गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वउपाध्यक्ष तथा हाल सल्लाहकार छन् । २०२२ सालमा सिरहाको लहानमा जन्मिएका शाहले वित्त व्यवस्थापनमा तथा लेखा विशेषज्ञका रूपमा अढाई दशकभन्दा लामो समय काम गरिसकेका छन् ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कारण पछिल्लो समय बजारमा काठको माग बढ्दै गएको छ । मागअनुसारको आपूर्ति व्यवस्था सहज हुन नसक्दा बजारमा काठको अभाव देखिइरहन्छ । वनजंगलको धनी देश नेपाल भनेर गौरव मात्रै गरिन्छ, तर काठमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्नै सकेन ।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै मुुलुक स्थायी सरकारको प्रतीक्षामा छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार वाम गठबन्धनलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्दै बाहिरिने निश्चित भइसकेको छ । पछिल्लो निर्वाचनको नतिजापछि सात दशकदेखिको राजनीतिक परिवर्तनसँगै जनताले परिवर्तन, स्थिरता, आर्थिक समृद्धि र विकास चाहिरहेका छन् ।
संघीय व्यवस्थामा सहकारी दर्ता, नियमनको काम स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हस्तान्तरण गर्न सकेको छैन । स्थानीय तहको कानुनी व्यवस्था र व्यवस्थापकीय क्षमता विकास नहुँदा हस्तान्तरणको काम ढिला भएको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् ।
कांग्रेसकै एजेन्डामा सबै दल आइपुगेका छन्
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले पटक–पटक अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालिसका छन् । विश्वकै उत्कृष्ट अर्थमन्त्रीका रूपमा समेत सम्मानित भइसकेका डा. महतले अघि सारेका कतिपय नीतिको वामपन्थी दलहरूले आलोचना गर्ने गर्दछन् ।
जलविद्युत्मा लगानी गर्न नेपालको जवाफ पर्खिरहेका छौं
नेपालका लागि बंगलादेशकी राजदूत मास्फी बिन्ते शाम्सले नेपालमा चार वर्षदेखि दुई देशको कूटनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्धको पुलका रूपमा काम गरिरहेकी छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा बंगलादेशले लगातार ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि गरिरहेको छ । तीव्र आर्थिक वृद्धिका कारण बंगलादेशमा विद्युत्को माग बढेको बढ्यै छ ।
नीतिगत सुधारको प्रभाव लगानीमा चाडै देखिनेछ
विदेशमा नेपालीले कमाएको रकमलाई वैधानिक माध्यमबाट स्वदेश भिœयाउने रेमिट्यान्स कम्पनी स्थापनामा पायोनियर मानिने चन्द्रप्रसाद ढकाल आइएमई समूहका कार्यकारी अध्यक्ष हुन् । ढकालको परिचय अहिले रेमिट्यान्स व्यवसायमा मात्र सीमित छैन ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा हाल उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री छन् । पटक–पटक मन्त्री भएका थापासँग धेरै मन्त्रालयसँग काम गरेको अनुभव छ । पछिल्लो पटक उर्जा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका थापाले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनीलाई दिने अघिल्लो सरकारको निर्णय खारेज गर्दै स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएका छन् । यसले उनको आलोचनासमेत भएको छ ।
६६ औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी गत साता सम्पन्न भएको छ । सरकारी अधिकारीले भन्सार प्रणालीमा कमजोरी रहेको स्वीकार गर्दै त्यसमा सुधार गर्दै जाने आश्वासन दिइरहे पनि कस्तो किसिमको सुधार गर्ने भन्नेमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवै अस्पष्ट छन् ।